Kedu Usoro Usoro Ọnọdụ HTTP?
Internet & Network Echiche ndị dị oke
Usoro Ọnọdụ Http
Ebe nrụọrụ weebụ na-egosipụta ọkwa ọnọdụ na nzaghachi nye njehie
Usoro Okpukpe HTTP bụ koodu nzaghachi omume nyere site na sava weebụ na ịntanetị. Koodu enyere aka chọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ mgbe ibe weebụ ma ọ bụ enyemaka ndị ọzọ adịghị arụ ọrụ nke ọma.
Okwu okwu koodu HTTP bụ okwu nkịtị maka eriri ọnọdụ HTTP nke na-agụnye koodu koodu koodu HTTP na okwu ntụgharị HTTP .
Akpọrọ koodu Http HTTP mgbe ụfọdụ a na-akpọ koodu mmeghe nchọgharị ma ọ bụ koodu ntanetị ịntanetị.
Dịka ọmụmaatụ, akara ọnọdụ HTTP 500: Njehie Ntanetị dị n'ime mejupụtara koodu ọkwa HTTP nke 500 na okwu nke HTTP nke Error Server Error .
Iri ise nke HTTP ọnọdụ code error exist; ndị a bụ ndị isi isi abụọ:
4xx Error Ndị ahịa
Ụdị ọkwa koodu HTTP a gụnyere ndị ebe arịrịọ maka ibe weebụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-agụnye ihe ọjọọ ọjọọ ma ọ bụ enweghị ike jupụta maka ihe ọzọ kpatara ya, ma eleghị anya site na onye ahịa (webfer).
Ụfọdụ ndị na-azụ ahịa ahịa HTTP ọnọdụ Koodu gụnyere 404 (Achọghị) , 403 (Agbachibidoro) , na 400 (Arịrịọ Bad) .
5xx Njehie Server
Ụdị ọkwa koodu HTTP a na-agụnye ebe ndị na-arịọ arịrịọ maka ibe weebụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ahụ maka ihe nkesa weebụ ma ọ gaghị enwe ike ijupụta ya maka ihe kpatara ya.
Ụfọdụ ihe nkesa njehie HTTP ọnọdụ Koodu na-agụnye 500 na- ewu ewu (Error Server Server) , yana 503 (Ọrụ adịghị arụ ọrụ) na 502 (Bad Gateway) .
Ozi ndị ọzọ na koodu http http
Ọnọdụ koodu HTTP ọzọ dị na mgbakwunye na koodu 4xx na 5xx. E nwekwara 1xx, 2xx, na codes 3xx bụ ndị na-akọwa ozi, kwadoro ihe ịga nke ọma, ma ọ bụ kpebie redirection, n'otu n'otu. Ụdị ndị ọzọ nke koodu Http HTTP abụghị njehie, n'ihi ya, ị gaghị a mara banyere ha na ihe nchọgharị ahụ.
Hụ nchịkọta zuru ezu nke njehie na Usoro Nzuzo Usoro Usoro Http anyị, ma ọ bụ hụ ndị a niile ọnọdụ http HTTP (1xx, 2xx, na 3xx) na anyị Gịnị bụ Ọnọdụ Ọnọdụ HTTP? otu.
Iyi akwukwọ Usoro Ntugharị nke IANA (HTTP) Usoro ndekọ Usoro Ọnọdụ bụ isi ọrụ maka koodu ọnọdụ HTTP mana Windows na - agụnye ụfọdụ, njehie ndị ọzọ akọwapụtara ihe. Ị nwere ike ịchọta ndepụta niile nke saịtị weebụ Microsoft.
Dịka ọmụmaatụ, ebe koodu ọkwa HTTP nke 500 na-egosi Njere Ọrụ Ntanetị, Microsoft Internet Services Services (ISS) na-eji 500.15 na-apụta na a naghị ekwe ka Ndenye na-arịọ maka Global.aspx .
Lee ihe atụ ole na ole ndị a:
404.13 nwere ntụgharị okwu HTTP nke Ogologo oge n'ogologo .
500.53 pụtara Aghaghachị ederede mere n'oge RQ_RELEASE_REQUEST_STATE ngosi nhazi. Ọhụụ mmebi iwu na-apụ apụ. A haziri iwu ahụ ka e gbuo ya tupu ewepụta ihe ntanetị ọrụ .
502.3 pụtara Bad Gateway: Na-ebugharị Njikọ Njikọ (ARR) .
Ndị a na-akpọ sub-codes nke Microsoft ISS rụpụtara anaghị edochi koodu ọnọdụ Http kama a na-achọta ya na mpaghara dị iche iche nke Windows dị ka faịlụ akwụkwọ.
Usoro Mmehie niile ejighi ya
Ụkpụrụ ọnọdụ HTTP abụghị otu ihe dị ka koodu njikwa akaụntụ Manager ma ọ bụ koodu njehie usoro . Ụfọdụ usoro njehie njehie na-ekere koodu nọmba na koodu ntanetị HTTP kama ha bụ njehie dị iche iche na ozi ọjọọ na ozi dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, koodu koodu HTTP 403.2 pụtara ohere ịnweta ohere . Otú ọ dị, e nwekwara usoro njehie nke koodu 403 nke pụtara Usoro ahụ adịghị n'ọnọdụ nhazi ndabere .
N'otu aka ahụ, koodu ọkwa 500 nke pụtara Njere Ọrụ Ntanetị nwere ike ịme mgbagwoju anya maka koodu njehie nke koodu 500 nke pụtara profaịlụ njirimara apụghị ịrụ ọrụ .
Otú ọ dị, ndị a abụghị ndị metụtara ya na ekwesịghị ka a na-emeso ya. Otu na-egosipụta na ihe nchọgharị weebụ na-akọwa ozi njehie banyere onye ahịa ma ọ bụ ihe nkesa, ebe nke ọzọ na-egosi na ebe ọzọ na Windows ma ọ dịghị mkpa itinye ihe nchọgharị weebụ na niile.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịchọta ma koodu njehie ị na-ahụ bụ koodu ọnọdụ HTTP, lelee anya ebe a ga-ahụ ozi ahụ. Ọ bụrụ na ịhụ njehie na ihe nchọgharị weebụ gị, na ibe weebụ , ọ bụ koodu nzaghachi HTTP.
Ozi ndị ọzọ na-ezighị ezi kwesiri ka a zụọ ha iche iche dabere na ihe a na-ahụ ha: Njirimara Onye Nchịkwa Ngwaọrụ hụrụ na Njikwa Ngwaọrụ, usoro nchịkwa usoro gosipụtara na Windows, POST koodu na -enye n'oge Ike na Nwale Onwe , wdg.
Linksys E1200 Default Paswọdu
Kedu ihe bụ USB USB?
Ọrụ VPN na Access na Adreesị IP International
Kedu ebe ntanetị ikuku?
Na-arụ ọrụ na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na Hexadecimal
A Nduzi na X.25 na netwọk Kọmputa
Ụdị Wi-Fi Ngwaọrụ maka Netwọk Ụlọ
Ndị ọkwọ ụgbọala 6 kachasị mma ịzụta na 2018 maka $ 50
Modprobe - Iwu Linux - Iwu Unix
102 Ngbanwe Ị Pụrụ Ime Ka Mma Gbanwee Blog Gị Ugbu a
Gịnị mere iPhone 6 na iPhone 6 Plus dị iche?
Kedu ihe FSB Njikwa?
Esi weghachite ehichapụ faịlụ egwu site na Kaadị ebe nchekwa
The iPad Ngwa Nduzi
Nwee obi ụtọ na ngwa ngwa mmemme nke Apple
Olee otú iji wụnye Flash, Steam Na MP3 Codecs Na Fedora Linux
Ihe kachasị mma 10 kachasị mma ịzụta na 2018
Otu esi eji Proxy Debia
Block a Sender via Email Address na Windows Live Hotmail
Kedu ihe bụ DAR File?
Kedu ihe bụ XPD File?
Laptọọpụ 9 kachasị mma ịzụta na 2018
Olee otú Iji Jiri Apple App Store Na iOS 11
Otú ndị nne na nna nwere ike isi nyere ụmụ ha aka ịnọgide na-echekwa Facebook
Malite nzaghachi gị na Top na Mozilla Thunderbird
Esi Chọta Openal32.dll achọtaghi ma ọ bụ njehie efu
Direct, Bipole, na Ndị Dipole na-ekwu Okwu
Telefon ikuku igwe ikuku 5 kacha mma iji zụta na 2018
Olee Otú Ị Pụrụ Isi Kwụsị Mgbe Ịnọdụ Cryptocoins